Ukwenziwa Kwengilazi Ngokwezifiso
Ingcweti ekucubunguleni okujulile kwengilazi ngesevisi eyenziwe ngezifiso ehlinzekelwe noma yiziphi izidingo ezithile ngosayizi, ukuhlelwa, ukubhola, ukuthambisa, ukuphrinta kanye nokwelashwa kwendawo.
Onjiniyela abangaphezu kwe-10 abanekhono abanolwazi olungaphezu kweminyaka engu-5 ukuze baqinisekise imikhiqizo yakho i-Saida Glass ikunikeza nge-lever ephakeme nokusebenza okuzinzile emakethe.
Gcwalisa imigqa yokucubungula ingilazi eyodwa yesitobhi nabasebenzi abanamakhono, i-SOP ecwengisisiwe kanye nokuhlolwa kwekhwalithi okuku-inthanethi. Ayikho i-MOQ nokuhlolwa okungu-100% kokuthunyelwa ngakunye.
Uyazi ukuthi yini inki ye-ceramic yokushisa okuphezulu ngokuphrinta kwedijithali?
Ingilazi yinto eyisisekelo engamunceki enendawo ebushelelezi. Uma usebenzisa u-inki wokubhaka wokushisa ophansi ngesikhathi sokuphrinta kwesikrini sikasilika, kungase kwenzeke inkinga ethile engazinzile njengokunamathela okuphansi, ukumelana nesimo sezulu esiphansi noma ukuqala kwe-inki ukuxebuka, ukushintsha kombala nezinye izenzakalo. Uyinki we-ceramic o...
© Copyright - 2010-2025: Wonke Amalungelo Agodliwe.
Glass Ukuze Ukukhanyisa Cover , Isinyathelo Glass Ukuze Lighting, Ikhaya Zikagesi omnene Glass, Cover Glass , bobumba Phrinta Cover Glass , Smart Buka Cover Glass ,